देश – Page2– Radiokathmandu देश – Page2– Radiokathmandu
जनकपुरबाट पेस्ताेलसहित एक जना पक्राउ
१९ जेठ, काठमाडौं । हतियार लिएर खुल्ला रुपमा हिँडदै गरेका एक युवक जनकपुरधामबाट पक्राउ परेका छन्। महोत्तरीको लोहारपट्टी नगरपालिका ८ बस्ने २० वर्षीय डिके भनिने एजिजुल राइनलाई जकनपुरधाम १७ स्थित तेतरियाबाट हतियारसहित पक्राउ गरिएको प्रहरीले…
मोरङ: लागूऔषध सहित एक जना पक्राउ
१८ जेठ, काठमाडौं । मोरङ प्रहरीले लागूऔषध सहित एक जनालाइ पक्राउ गरेकाे छ । पक्राउ पर्नेमा बिराटनगर महानगरपालिका-१४ का ४१ बर्षीय संजय यादव रहेका छन । उनकाे साथबाट प्रहरीले डि.सी. १०० एमएल को ३१ बोतल,…
रुकुम घट्नाको दोषीलाई कडा कारवाहीको माग गर्दै माइतीघरमा प्रदर्शन
१६ जेठ, काठमाडौं । रुकुम पश्चिममा दलित युवाको हत्या विरोधमा राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ, नेपालले काठमाडौंमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । काठमाडौंको माइतिघर मण्डलामा उनीहरुले घट्नाको सत्यतथ्य छानविन गरी दोषीलाई कडा कारवाहीको माग राख्दै प्रदर्शन…
१६ जेठ, काठमाडौं । सर्लाही प्रहरीले गाँजासहित दुई जनालाई पक्राउ गरेकाे छ । पक्राउ पर्नेमा सर्लाहीका तौसिफ राजा मिकरानी र अजमल मिकरानी रहेका छन । अपाची मोटरसाईकल सवार उनिहरूलाइ संका लागि चेकजाँच गर्दा कार्टुनमा अवैध…
१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले श्रम गन्तव्य मुलुकमा रोजगार गुमाएका नेपालीलाई स्वदेश फिर्ताका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छ । सरकारले करिब २५ हजार नेपाली नागरिकलाई स्वदेश फर्काउने योजना बनाएको छ । सरकारले बजेटमार्फत रकम विनियोजन…
मेलम्चीको दोस्रो चरणको काम सम्पन्न गर्न पाँच अर्ब ४६ करोड विनियोजन
१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको सुरुमै काठमाडौं उपत्यकामा मेलम्चीको पानी वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ। बिहीबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यस्तो घोषणा…
शिक्षा क्षेत्रका लागि १ खर्ब ७१ अर्ब बजेट बिनियोजन
१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले शिक्षा क्षेत्रका लागि १ खर्ब ७१ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । आधारभूत शिक्षामा सबैको पहुँचको लागि यो बजेट छुट्याइएको अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खडिवडाले जानकारी दिए । उनकाअनुसार साक्षर हुन…
सरकारी र निजी क्षेत्रका कर्मचारी भ्रमण गर्न प्रोत्साहन गरिने
१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन तथा पर्यटन उद्योगको रक्षा गर्न देश दर्शन कार्यक्रम सन्चालन गर्ने भएको छ । निजामती कर्मचारी, संगठित संस्थाका कर्मचारीलाई देश दर्शनका लागि पठाइने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी…
१५ जेठ, काठमाडौं । गीतकार रत्नशमशेर थापाको नर्भीक अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएको छ । बिहीबार दिउँसो १२ बजे उनको निधन भएको पारिवारिक स्रोतले जानकारी दिएको छ । थापाको ‘ए कान्छा ठट्टैमा यो बैंश जान लाग्यो’,…
१४ जेठ, काठमाण्डाैं । झापाको मेचीनगर नगरपालिका-१२ का २४ बर्षीय रामायण राजवंशीको करेन्ट लागेर मृत्यु भएको छ । मंगलवार दिउँसो पौने ३ बजेको समयमा आफ्नै घर छेउमा करेन्ट लगाई माछा मार्ने क्रममा उनलाई करेन्ट लागेकाे…